LG Optimus 4X HD, afar-geesle Smartphone | Laga soo bilaabo Linux
LG wuxuu soo bandhigayaa Smartphone-ka Koowaad ee Koowaad, Optimus 4X HD
La Shirkadda LG kama baaqi doono inuu na qanciyo Shirweynahan Caalamiga ah ee Moobaylka ee magaalada Barcelona, ​​isagoo ina tusaya mid ka mid ah liistada ugu casrisan ee safka casriga taas oo noqon doonta mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran xilli ciyaareedka. Shalay Shirkadda Kuuriya waxay xaqiijisay jiritaankeeda Habka Optimus 4X HD, dhacdadani waxay ka mid tahay kuwa ugu horreeya ee sumadda in Waxay leedahay processor 4-core ah.
Shirkadda LG waxay billowday sanad ka hor abuurista aalado leh labo geesood oo ah 2x ugu wanaagsan mid ka mid ah oo si la mid ah isku mid ku dhaca Qalabka afar geesoodka ah.
Terminalkan wuxuu leeyahay a Nvidia Tegra 3 processor taas oo leh a 1,5 GHz xawaare Qalabkan oo leh kiniin Asus Transformer iyo HTC Quattrro, oo isla qaabkan loogu adeegsaday aalado kala duwan ayaa sidoo kale yeelan doona Teknolojiyada "4-plus-1" kaas oo gacan ka geysta hagaajinta nolosha batteriga.
Riwaayaddan LG Optimus 4X HD Smartphone isaga isku hallee Nidaamka Android 4.0 sida madal xukun. Sidoo kale shaashad 4,7-inji ah iyo xallinta 1,280 × 720 pixels, marka lagu daro haysashada 1 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo ah meel lagu keydiyo gudaha.
Qalabkani wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya jiilkan taleefannada casriga ah leh 4 udub dhacdadan inkasta oo imaatinka casriga noocan oo kale ah terminal-ka HTC oo markii hore loo yaqaanay HTC Endeavor, waxaan rajeyneynaa waxaan rajeyneynaa inaan aragno inbadan oo ka mid ah aaladaha aaladda ee marinnada. Golaha Caalamiga ah ee Mobile-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » LG Optimus 4X HD, afar-geesle Smartphone
LG Optimus 3D Max wuxuu ahaan doonaa MWC 2012